Hadalku wuxuu ugu weyn yahay kulliyadaha, tixraaca maanka, iyo ammaanta dhaqanka aadanaha; laakiin asalka hadalka oo dhami waa Breath. Xagee buu uga yimid Neefta oo meeshii la tagana waxaa lagu baran karaa iyadoo la raacayo talooyinka Maahmaahda Delphic Oracle: "Ninkii Naftaada yaqaan."
XUBNAHA qoyska aadanaha ayaa neefsanaya laga soo bilaabo xilligii ay soo galeen adduunkan jireed ilaa waqtigii ay ka baxayeen, laakiin maahan ilaa rubuc qarnigii la soo dhaafay in laanta reer galbeedku ay tixgelin culus siiso ahmiyada weyn ee neefsashada, iyo habka neefsashada. U fiirsashada markii loo jiheystay mowduuca, waxay qaateen qaabab ay ku taliyaan “macallimiin” qaar badanna waxay noqdeen kuwa waalan. Aqoonyahannada cilmiga neefsashada ayaa naga dhex muuqday, kuwaas oo, tixgelin ahaan, baraya kuwa aan la aqoon sida loo helo iyo sida loo ilaaliyo dhalinyarada aan dhiman karin, kor u kaca firfircoonaanta, awooda dhammaan ragga, xakamaynta iyo hagida ciidamada adduunka, iyo sida loo helo nolosha weligeed ah.
Waxaan qabnaa fikrad ah in jimicsiga neefsashada uu faa iidaysan karo oo keliya haddii la qaato tilmaamaha qof aqoonta dhabta ah leh ka dib maskaxda ardayga lagu tababaray oo ku habboon iyaga daraasadda falsafadda, maxaa yeelay taasi waxay bari doontaa kuwa kala duwan kartida iyo tayada ardayga sida ay ku koreen neefsashada, una ogolaanaysa inuu la tacaaliyo khataraha ka soo baxa maskaxda. Neefsashada dabiiciga ah ee dhaadheer ayaa wanaagsan, laakiin, iyada oo ay sababtu tahay jimicsiga jimicsiga neefsashada, qaar badan ayaa daciifiyay ficilkii wadnaha iyo xannuunnada neerfaha, cudurada soo kordha, —midaha badanna isticmaalka - waxay noqdaan niyad-jab iyo kacsi, cunno cunno xumo iyo damqasho la buunbuuniyey, maskaxdooda isku dheelitiran, oo xitaa ku dhammaaday ismiidaamin.
Neef noocyo kala duwan ah ayaa jira. Waxaa jira Neefsashada weyn oo ku baaba'aysa oo ku baxda si aan kala joogsi lahayn; Isaga oo adeegsanaya nidaamyada caalamku waxa ay ka soo neefsadaan waxyaalaha aan la arki karin illaa waxyaalaha la arki karo. Mid kasta oo ka mid ah nidaamyada qorraxda lama tirin karo waxaa lagu neefsanayaa nidaam u gaar ah oo dunidaba; oo haddana mid kasta oo ka mid ah ayaa ka neefsada qaabab kala jaad ah. Foomamkaas waxaa dib u soo cusboonaysiiyay ku-biiriddii nidaamyada adduunka, kuwaas oo ku burburay nidaamkoodii qorraxda, oo dhammaantoodna ku soo qulqulaya Waddada Weyn.
Nin ahaan, yaa nuqul ka ah waxaas oo dhan, noocyo badan oo neefsasho ah ayaa ka ciyaara. Waxa caadi ahaan loo yaqaanno neefta jir ahaaneed neef ma ahan haba yaraatee, waa ficil neefsasho. Dhaqdhaqaaqa neefsashada waxaa keena neefsashada maskaxda oo caadi u ah dadka iyo xayawaankuba, neefsashadani waxay qabataa nolosha qaab. Neeftu ma aha nitrogen iyo oksijiin, laakiin walxahaas iyo kuwa kale ayaa loo adeegsadaa neefsashada maskaxda si ay jidhka ugu taageerto cunnooyinka qaarkood. Neefsashadaasi waxay ka shaqaysaa qaybo badan waxayna u adeegtaa ujeedooyin badan. Markay gasho jirka dhalashada waxay sameysaa isku xirnaanta ka dhexeysa nolosha jidhkaas iyo badweynta nolosha ee ay dhulka iyo jirka bani aadamka ku dhex socdaan. Mar haddii xiriirku go'an yahay neefsashadaani waxay la xiriirtaa nolosha hadda jirta iyada oo aan jirku iyo gudaheeda ku xirneyn qaab dhismeedka, kaas oo qaab dhismeedka dabka ee nolosha u beddelaya qaabka iyo qaabka jirka. Ku shaqeynta caloosha iyo beerka neefsashadan waxay kicisaa xiisahooda, damaca, iyo rabitaanka. Sida dabaylku u dul ordo xadhkaha hargaha aeolia, sidaas oo kale neefsashada maskaxdu waxay u shaqaysaa shabaqyada dareemayaasha jirka, maskaxda ayey kicisaa oo waxay ku hogaamisaa jihada fikradaha xubinta taranka, inkasta oo aan ahayn mid - ama guri oo ku fuliya damacyada jidhku ku taliyay.
Laakiin neefta dhabta ah ee dadku waa neefta maskaxda oo waa dabeecad ka duwan. Waa aaladda maskaxda maskaxdu ku shaqeyso jirka. Tani waa neefsashada saameysa fikirka, taasi waa, fikradaha uu soo saaro maskaxda. Neefsashada maskaxdu waa jidhka ama mabda'a maskaxda ee laftiisa, taas oo nafta nafta weligeed ah ee qofku u istcimaalo sidii gaadhigeeda si ay xidhiidh ula samayso jidhka jidh ahaan dhalashada. Markay neefsashadani gasho jidhka markay dhalato, waxay abuurtaa xidhiidhka ka dhexeeya jidhka jidh ahaanta ama ego ama “Aniga” mabda '. Isaga ayaa ku soo galaya adduunka, kuna nool dunida, ka baxda dunida, kana gudba jir ahaanta una sii gudba jidhka. Lacagtuna waxay ku shaqeysaa oo ka shaqeysaa jirka jirka neefsashadan. Ficilka joogtada ah iyo falcelinta ka dhaxaysa jirka iyo maskaxda waxaa neefta qaada. Neefta maskaxdu waxay hoos timaadaa neefta maskaxda.
Waxaa sidoo kale jira neefsi xagga ruuxa ah, kaas oo xakameeya maskaxda iyo neefsashada maskaxda. Neefsashada ruuxiga ah waa mabda'a hal abuurka kaas oo rabitaanku ku shaqeynayo, xakameeyo maskaxda, iyo inuu nolosha aadanaha ku waafajiyo himilooyinka rabaani ah. Neefsashada waxaa ku hagaya rabitaanka horusocodka jirka oo uu ku kiciyo xarumaha dhintay, wuxuu nadiifiyaa xubnaha taabtay nolosha dareenka, wuxuu kiciyaa fikradaha, wuxuuna ku baaqayaa run ahaanshaha suurtagalnimada rabbaaniga ah ee aadanaha.
Hoos u dhig neefsigan oo dhan iyo taakuleynta ayaa ah Neefta Weyn.
Neef-ruxid u eg-dhaqdhaqaaqa neefsashada, oo ah neefta maskaxda, ayaa gala oo ku wareegeysa jidhka dhalashada markii ugu horeysa. Gelitaankan neefsashadu waa bilowga dhisitaanka shakhsiyadda iyada oo loo marayo qaab ahaan aadanaha adduunka. Waxa jira hal xarun oo ah neefta jirka gudaheeda iyo xarun kale oo ka baxsan jidhka. Nolosha oo dhan waxaa jira qulqulka biyaha iyo socodka u dhexeeya labadan xarumood. Waqtiga lagu neefsanayo jir ahaaneed kasta waxaa jira barbaarin u dhiganta neefsashada maskaxda. Caafimaadka jirka, niyadda, iyo caafimaadka ruuxi ahaaneed, waxay kuxirantahay dhaqdhaqaaqa iswaafajiya neefsashada udhaxeysa xarumahaan. Haddii qofku doonayo inuu neefsado wax kasta oo aan ahayn dhaqdhaqaaqa ikhtiyaariga ah, taxaddar waa in loo qaataa in nooca iyo habka neefsashada ee loo go'aamiyaa ay kuxiran tahay jir ahaan, niyadiisa, iyo jir ahaanta ardayga, himilooyinkiisa iyo himilooyinkiisa. Neefku waa wareegga iyo dibedda ee pendulum kaas oo dila nolosha jidhka. Dhaqdhaqaaqa neefsiga ee u dhexeeya labada xarumood wuxuu hayaa isku dheelitirka nolosha jirka. Haddii lagu farageliyo nacasnimo ama ujeedo, caafimaadka jirka iyo maskaxda waa la daciifin doonaa oo cudur ama geeri ayaa dhalan doonta. Neefku wuxuu caadi ahaan ka yimaadaa sanka midig illaa laba saacadood, ka dibna wuu is beddelaa oo wuxuu si siman ugu socdaa labada sanka si isku mid ah daqiiqado yar, ka dibna sanka bidix ilaa laba saacadood. Taas ka dib waxay si siman ugu socotaa labadaba, ka dibna mar labaad waxay ka soo baxaysaa sanka midig. Dhamaan dadka caafimaadkiisu dhan yahay tani waxay ku sii socotaa dhalashada ilaa dhimashada.
Nooc kale oo neefta ah oo aan guud ahaan la aqoon ayaa ah inay ku jiido gudaha iyo hareeraha hirarka dhererka kaladuwan, oo lagu go'aamiyo neefsashada dabeecadda, iyo jirkiisa, niyadiisa, iyo caafimaadkiisa ruuxiga ah iyo horumarka.
Hadda howsha neefsashadu waxay ka kooban tahay is beddel ikhtiyaariga ah ee qulqulaha ka imanaya bidix ama midig sanka ilaa midig ama bidix, sida kiiska laga yaabo, ka hor inta isbedelka dabiiciga ah la dejin, si qasab looga hortago socodka, iyo sidoo kale in la beddelo dhererka hirarka. Marka la eego waxa laga sheegay neefta waa inay noqotaa mid muuqata in xidhiidh qumman oo ka dhexeeya ninka aadamiga iyo adduunku in si sahal ah loo faragalin karo xiriirkiisana isu dheellitirnaan la'aan. Sidaa daraadeed qatarta weyn ayey u tahay jaahiliinta iyo finanka kuwaas oo jimicsi neefsasho ah sameeya iyada oo aan la hubin in la waafajinayo, iyo yeelashada macallin aqoon leh.
Dhaqdhaqaaqa neefsashada wuxuu ku shaqeeyaa awooda badan oo jirka ka mid ah. Dayactirka nolosha xayawaanku waxay u baahan tahay sii wadista nuugista oksijiinta iyo ka saarida aashitada kaarboon. Kaadida hawada ayaa la galiyaa sambabbada halkaas oo ay ku kulmaan dhiiga, oo nuugta oksijiinta, la nadiifiyo, laguna gudbiyo nidaamka halbowlaha dhammaan qaybaha jirka, dhismaha iyo unugyada quudinta; ka dibna qaababka xididada dhiiga ayaa ku soo noqda iyada oo lagu soo oogay aashito kaarboon iyo qayb ka mid ah alaabada qashinka iyo waxtarka cunugga, kuwaas oo dhammaantood laga soo tuuro sambabbada iyagoo dibedda ugu baxaya. Marka caafimaadka jirka wuxuu kuxiranyahay hawo ku filan oo dhiigga ah. Ogsijiinta ama ka hooseeya oksijiinta dhiigga waxay sababtaa dhisidda unugyada hadda dhiigga ee cilladahoodu kujirto dabeecadooda, waxayna u saamaxdaa jeermiga cudurku inuu tarmo. Cudurada jirka oo dhan waxaa sabab u ah ama ka hooseeya oksijiinta dhiigga. Dhiigga waxaa lagu qiijiyaa neefsashada, neefsiguna wuxuu kuxiran yahay tayada fikirka, iftiinka, hawada, iyo cuntada. Fikradaha saafiga ah, iftiin badan, hawo saafi ah, iyo cunno saafi ah, ayaa neefsashada saxda ah keena sidaas darteedna hawo qaadis habboon, sidaa darteed caafimaadka caabuqa.
Sambabbada iyo maqaarku ma aha wadiiqooyinka kaliya ee uu nin ku neefsado. Neefsigu wuu yimaadaa wuxuuna dhex maraa xubin kasta oo jirka ka mid ah; laakiin waxaa la fahamsan yahay in neefsigu aanu ahayn jidh ahaaneed, laakiin maskax ahaan, maskax ahaan, iyo ruux ahaanba.
Neefsigu wuxuu kiciyaa caloosha, beerka, iyo jilicsanaanta; Rabitaanka, damaca, iyo rabitaanka. Waxay galeysaa wadnaha waxayna awood siisaa shucuurta iyo fikradaha; waxay gasho madaxa waxayna bilawdaa dhaqdhaqaaqa laxiriira xubnaha nafsada ee maskaxda gudaheeda, taasoo keenaysa inay laxiriiraan qorshayaasha sare ee ahaanshaha. Markaa neefta oo ah maskaxda sanka waxa loo rogaa maskaxda bini-aadamka. Maskaxdu waa miyir-qabka "Aniga," laakiin waxaan ahay "bilowga waddada oo u horseedda kan lama-huraanka ah - Ka-warqabka.